Iindaba - Indlela yokuthintela umhlwa yentsimbi esekwe kumgubo wentsimbi
Inkqubo yokuthintela umhlwa yentsimbi esekwe kumgubo wentsimbi
Fe-based umgubo yokunyibilikisa isinyithi luhlobo lwenkqubo efanelekileyo yokwenza isinyithi, okonga izinto, ukugcina amandla, akukho ungcoliseko kwaye kufanelekile kwimveliso yobuninzi.Ngenxa yokuba isinyithi esisekwe kumgubo wokunyibilikisa isinyithi ngumgubo wentsimbi njengezinto ezingekenziwa, ngokusekwa kokucinezelwa, sintering, machining, unyango ubushushu kunye nezinye iinkqubo, ngoko ke iimveliso umgubo yokunyibilikisa isinyithi kufuneka inani elithile imingxunya ...
Isinyithi esisekwe kwisinyithi somgubo, i-Ningbo powder yokunyibilikisa isinyithi
Fe-based umgubo yokunyibilikisa isinyithi luhlobo lwenkqubo yokwenza isinyithi esebenzayo, okonga izinto, ukonga umbane, akukho ungcoliseko kwaye kufanelekile kwimveliso yobuninzi.Ngenxa yokuba isinyithi esisekwe kumgubo wokunyibilikisa isinyithi ngumgubo wesinyithi njengempahla eluhlaza, ngokucinezela ukuyila, ukuntywila, machining, unyango ubushushu kunye nezinye iinkqubo kwaye babe, ngoko ke imveliso umgubo yokunyibilikisa isinyithi kufuneka isixa esithile pores, ngokubanzi iqulethe 10% - 30% of pores.Compared kunye nezinto zentsimbi, oko kuthanda ukuba umhlwa. Ngaba singenza ntoni ukuvelisa umhlwa? Uthintela njani umhlwa? Okulandelayo, i-Ningbo powder yokunyibilikisa isinyithi kwii-gearbox zebhokisi yesinyithi-esekwe kumgubo wokunyibilikisa isinyithi-indawo yokuvumelanisa izinyo njengomzekelo, ukuze uphendule intsimbi esekwe kumgubo wentsimbi iindlela zokuthintela umhlwa.
Inkqubo yokuThintela ukuRusa yokuSebenzisa iZiko leZinyo leSynchronizer ngokusekwe kwiPower Powder Metallurgy Parts:
1, yentsimbi olungumgubo kuthintelo umhlwa: kuba ukuthengwa umgubo yentsimbi yinto olungumgubo into eqinileyo, kuya kubakho eninzi pores phakathi umgubo yentsimbi, ezifana emoyeni emanzi, ngexesha elifutshane kakhulu iya kuba umhlwa kunye caking, nto leyo ebangela Ukusetyenziswa kwe .Ngoko ke, ukuthengwa kwempuphu yentsimbi kufakwe kwisingxobo seplastikhi esitywiniweyo, ngaxeshanye ngaphakathi kufuneka kongezwe nge-desiccant, yangaphandle eneebhegi ezilukiweyo zokupakisha, ukuphakamisa okufanelekileyo.
2.Ukugcinwa komgubo wentsimbi: xa umgubo wentsimbi ugcinwe kwindawo yokugcina izinto, kufuneka ube kwindawo yokuqala, e-out-out.Iron powder kumxube, ngokokuthengwa kwepakethi, ipakishwe kwisingxobo seplastiki esigqibeleleyo itywiniwe, ukuthintela igcwala yentsimbi engumgubo oxutywe; Kubekwe kwiipelethi zomthi, ixesha eliphakathi kokusetyenziswa lihlala lilawulwa kwiintsuku ezi-3.
I-3, ukusetyenziswa kwenkqubo yokucinezela umgubo wentsimbi: kwinkqubo yokucinezela i-hub ye-synchronizer yehabhu, umgubo oxutywe ngentsimbi kufuneka usetyenziswe kunye nelothe. Akuvumelekile ukuthatha yonke ipowder yentsimbi ngaxeshanye ngenxa yemisebenzi emininzi. Isixa sokutshintsha ngakunye sisetyenzisiwe kwaye sifunyenwe, kwaye isixa somgubo oxutywe nentsimbi phakathi kweenkqubo kufuneka silawulwe ngokungqongqo.
4. Isynchronizer izinyo hub ucinezela ukugcinwa okungenanto: Isinchronizer izinyo hub icinezela ingenanto, amandla asezantsi, kulula ukonakalisa, kufuneka iphathwe kakuhle, ibekwe kwitreyi yeplastiki yemoto engenayo.Sintered kwaye icinezelwe ingenanto ngaphakathi kweeyure ezingama-48, ayinakonyusa inani yokhuseleko lokupakisha lwangaphandle, ngaphezulu kwexesha, nefilimu yeplastiki iya kuba kukujikeleza kweemoto, ukutywina, ukunqanda umoya omanzi ungene.
5, sintered izinyo hub sintered billet, usebenzisa iindlela ezintathu ezahlukeneyo anti-umhlwa: emva sintering, musa ukuthatha gwenxa anti-umhlwa, ukugqiba umgubo yokunyibilikisa isinyithi hub kunye 30 # oyile; Emva sintering, ngoko nangoko nkxu kwi F901 oyile anti-umhlwa umboniso , ukugqiba umgubo wokunyibilikisa amazinyo nge-30 # ioyile; Ukudityaniswa kokutsha, okt ukudibanisa kwioyile yokulwa ne-rust ye-WD40, ukugqiba umgubo wezinyithi zentsimbi nge-30 # yeoyile.
Le ndlela ingentla yokuthintela umhlwa yentsimbi esekwe kumgubo wokunyibilikisa isinyithi yaziswa apha. Ukufumana umlinganiso olula kunye nolusebenzayo wokuthintela umhlwa wentsimbi esekwe kumgubo wentsimbi, ukuze kwinkqubo yemveliso, kuncitshiswe iindleko zokuthintela umhlwa kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.